Goobaha tima jarayaasha ee aadan tabi karin | Ragga Stylish
Gadhka ayaa ka mood badan sidii hore weligiisna daryeelkiisu wuu badan yahay waana kala duwan yahay. Laakiin, wax kafiican majiraan inaad naftaada uhesho gacanta khubarada si ay iyagu yihiin kuwa kugula talinaya oo kaa dhigaya kuwa ugu jarista iyo xiirashada wanaagsan. Madrid iyo Barcelona in muddo ah, dhismayaal duug ah oo ku yaal dukaamadan timo-jare ayaa dib u soo kabanaayey oo quruxdoodii hore ayaa laga qaatay si looga dhigo xarumo run ah oo lagu cibaadeysto gadhka oo loogu talo galay gourmets-ka ugu badan.
Warshad shar ah: oo ku yaal quraafaadka Plaza del 2 de Mayo, farsamadeeda xiirashada dhaqameed ee ugu caansan oo xitaa ay ku jiraan isticmaalka shukumaanno kulul. Adeegyadooda waxaa ka mid ah wax kasta oo laga bilaabo timo jarista, iyada oo loo marayo hagaajinta, xiirashada oo dhameystiran iyo dayactirka naqshada garkaaga.
Dukaan Baaraha: oo ku taal bartamaha Calle Colón, waxay leedahay dhammaan muuqaalka dukaanka timo jaraha caadiga ah iyada oo ay ugu mahadcelinayaan tirooyinkii hore ee buuxiyay dhismaha oo u rogay matxaf yar. Iyada oo la adeegsanayo qaab Mareykan ah oo la calaamadeeyay, kuraasta ayaa ah kuwo cajiib ah iyo sidoo kale diiwaanka lacagta, waxayna sidoo kale ku jiraan adeegyo badan oo aad u kala duwan.
Barberia San Bernardo: Waa nooc ka mid ah caasimadda. Wadnaha Madrid, wareega wareega ee magaceeda u bixiya, waxaan ka helnaa xarun leh dhadhan duug ah oo aan ka tanaasulin farsamooyinkii ugu dambeeyay ee xiirashada.
Tima-jaraha Gràcia: Ganacsi qoys, oo la abuuray 1964, kaas oo wali ku sii haya fikirkiisa aan la beddeli karin waqtiga maanta. Isku keen fikradaha dhaqameed ee farsamooyinka iyo aaladaha horumarsan; sharad ku saabsan qaababka hadda jira iyo isbeddellada.
Vicenç Moreto: Ganacsi qoys oo in ka badan 60 sano u adeegaya qaybta ragga, oo ku taal Raval, wadnaha Barcelona. Waxay bixisaa adeegyo kala duwan oo laga helo shukumaanka kulul ee xiiran iyo rosemary saliida lagama maarmaanka u ah timo jarista.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Goobaha tima jarayaasha ee aadan tabi karin
Kabahayaga 10-ka ah ee loogu jecel yahay deyrtan